Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo mamnuucay isticmaalka gawaarida muraayadaha madow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha ciidamada booliiska Puntland oo mamnuucay isticmaalka gawaarida muraayadaha madow
December 19, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliyaha ciidamada booliiska Puntland, Kornayl Cabdulqaadir Shire Faarax. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada booliiska Puntland, Kornayl Cabdulqaadir Shire Faarax oo loo yaqaan Ereg ayaa iclaamiyay tilaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka gudaha Puntland.
Shir saxaafadeed uu Ereg ku qabtay caasimada Garoowe ayuu ku sheegay in la mamnuucay isticmaalka muraayadaha madow ee gawaarida, sidoo kale ayuu ku amray ciidamada ammaanka in ay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan kuwa jebiya sharciga.
Taliyaha ciidamada booliiska ayaa sheegay in muraayadaha madow oo geliya loo ogolyahay Madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
“Anoo tixraacaya digreetadii madaxweynaha Puntland ee ku taarikhaysnayd 12, July 2014, waxaan si rasmi ah u mamnuucay isticmaalka muraayadaha madow ee baabuurta. Sharcigu waxaa kaliya oo u ogolaanayaa hoggaamiyaasha Puntland iyo golaha baarlamaanka, balse waa ka mamnuuc cid kale in ay isticmaasho.” Ayuu yiri taliye Ereg.
Puntland ayaa dhowr jeer oo hore mamnuucday gawaarida muraayadaha madow balse wali waxaa muuqata in laga isticmaalayo gudaha magaalooyinka waa-weyn.
May 10, 2017 Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho dib uga bilaabmatay
Safiirka Ruushka u fadhiyay gudaha Turkiga oo la toogtay
Doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho ka bilaabmatay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada xubnaha aqalka sare ee Somaliland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ka bilaabmatay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo lix iyo toban (16) musharax ayaa doorashada maanta ku tartami doona [...]
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ku tilmaamay “riyo maalmeed” shirkii madaxda maamul goboleedyada ee ka dhacay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cumar Camay ayaa kasoo horjeestay shirkii u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhawaan lagu qabtay magaalada Garoowe. Wareysi uu siiyay taleefishinka maxaliga ah ee SBC, ayuu ku [...]